Hoggaamiyihii mucaaradka dalka Congo Etienne Tshisekedi oo geeriyooday | SAHAN ONLINE
Hoggaamiyihii mucaaradka dalka Congo Etienne Tshisekedi oo geeriyooday
GAROOWE – Hoggaamiyihii mucaaridka dalka Congo Etienne Tshisekedi ayaa geeriyooday xili uu baaritaan caafimaad u joogay magaalada Brussels ee dalka Biljimka.
Xisbigiisa UDSP ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada hoggaamiyahooda oo 84 sano jir ahaa.
Tshisekedi ayaa aasaasay xisbigan siyaasadeed ee UDSP sanadkii 1982,isagoona xiligaas ku mucaaraday kaligii taliyihii hore ee dalkaas Mobutu Sese seko kaasoo muddo dheer soo xukumayey dalka Kongo oo waqtigaas la oran jiray Zaire.
Hoggaamiyahan geeriyooday ayaa marar badan Raiisal-wasaare usoo noqday madaxweyne Mobutu Sese Seko ayaa in muddo ah ku noolaa dalka dibadiisa ka hor inta uusan dib ugu noqon dalkiisa Kongo bishii July ee sanadkii hore.
Etienne Tshisekedi ayaa dhimashadiisu kusoo aaday xili mucaaradka dalkiisa ay ku riixayaan Madaxweyne Joseph Kabila in uu iscasilo kadib markii ay ku eedeeyeen in doorashadii dalkaas uu musuq-maasuqay.